Khasaaraha ka dhashay dhulgariirkii Turkliga oo sii kordhaysa. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Khasaaraha ka dhashay dhulgariirkii Turkliga oo sii kordhaysa.
Khasaaraha ka dhashay dhulgariirkii Turkliga oo sii kordhaysa.
Ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhimatay 804 kalena waa ay ku dhaawacmeen dhul gariir xoogan oo cabirkiisu yahay 6.6 kaas oo shalay ku dhuftay magaalada Izmir ee dalka turkiga, Saacadu markay ahayd 2:51 pm Waqtiga maxalliga ah.
Wasiirka caafimaadka ee dalka Turkiga Fahrettin Koca ayaa sheegay in 435 qof ay daweynayaan, halka 25 kamid ah dadkaas ay ku jiraan xaalad Deg-dega ah 9 kamid ahna ay kujiraan qaliin, Waxaa uu intaas ku daray in 364 ruux laga saaray isbitaallada, kadib markii ay dhammaysteen adeegoodii caafimaad.
Hay’adaha gurmdka deg degga ayaa wali wada dadaallo lagu baadi goobayo dad laga cabsi qabo in wali ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha.
Madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u muujiyay isku duubni bulshada, wuxuuna sheegay in Turkigu garab taagan yahay muwaadiniintiisa uu saameeyay dhulgariirka.
Previous articleXaflad lagu weyneynaayay nabi muxamed NNKH oo ka dhacday magaalada Cadaado.
Next articleCiidanka xoogga dalka oo hawlgal ka dhan ah Al-shabaab ka fuliyey G/Hiiraan.